यस्ताे छ छोरा जन्माउने चाइनिज सुत्र १०० % काम गर्ने प्रविधि – Nepal Trending
यस्ताे छ छोरा जन्माउने चाइनिज सुत्र १०० % काम गर्ने प्रविधि
काठमाडौं । गर्भवती समाजमा छोरा या छोरी नजन्मिएकै कारण कैयौ परिवारमा द्वन्द्व हुने गर्दछन् । यसकै कारण कयै महिलाले मानसिक र शारिरीक यातना भोगिरहेका घट्नाहरु छन् । कतिपय महिलाले यसैको कारण सौता त कतिपयले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपरेका घटनाहरु भेटिन्छन् ।
कोही भने सन्तान प्राप्तीका लागि भएभरका अस्पताल, बैद्य, मठ–मन्दिर र तीर्थस्थलमा पुगेर सास्ती बेहोरिरहनु भएको त छैन ? यदि त्यसो हो भने छोड्नु होस्, ती सबैखाले प्रयास । चिनियाँ बैज्ञानिकहरुले लामो समय र अनुसंधानपछि पत्ता लगाईएको यो प्रविधि ९९.९ प्रतिशत सफल भएको छ ।तपाई पनि ढुक्कका साथ यो प्रविधि अपनाउनु होस् । इच्छा र चाहाना तपाईको छोरा या छोरी पाउने जिम्मा श्रीमतिको ।
गुगलमा गई सर्च बक्समा Chinese Calender for Boy Or Girl वा S*ex Determination टाईप गरी उक्त कुराको जानकारी लिन सकिन्छ । चाइनीज विशेषज्ञको यो आविष्कारको बारेमा अहिलेसम्म ६०–७० जनालाई यो सल्लाह दिएको र हालसम्म कुनै किसिमको गुनासो नआएको डिभिजन खानेपानी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत द्वारिकाबहादुर तामाङ बताउँछन् । चार्टको माथिल्लो तेर्सो हरफमा महिलाको उमेर दिएको छ । बायाँतर्फको ठाडो हरफमा महिना दिएको छ ।
१७ वर्षकै उमेरमा काकाको छोरासँग जबरजस्ती बिहे गराइदिएपछि…
कस्तो अचम्म ! चिनियाँहरुको छतमा खेतिपाति देखि पशुपालनसम्म देखेर दुनियाँ चकित (…
कस्तो अचम्म ! अर्काको कुरा काटे जरिवाना तराईने
गुप्ताङ्गको तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गर्दै १० लाख कमाई !!
प्रेमीले आइफोन किनिदिएनन्ः रिसाएकी प्रेमिकाले सबैको अगाडि हानिन् ५२ झापड (भिडियो…
यस्तो राम्री छोरी भर्ना गराउन ७२ करोड घुस !